Ny tantaran'i Rob E. Boley dia mampihoron-koditra amin'ny tantara taloha - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny tantaran'i Rob E. Boley dia mampatahotra amin'ny tantara taloha
Ny tantaran'i Rob E. Boley dia mampatahotra amin'ny tantara taloha
by Waylon Jordan Enga anie 18, 2015
nosoratan'i Waylon Jordan Enga anie 18, 2015
Indray mandeha, Snow White dia naka manaikitra avy amin'ny paoma natolotr'ilay mpamosavy ratsy fanahy azy, Queen Adara, nanery azy. Natory tao anaty torimaso toy ny fahafatesana i Snow ary tsy afaka namoha azy ireo sakaizany fito madinidinika ao amin'ny Collective. Rehefa afaka kelikely, tonga teo amin'ny toeran'ny vatam-paty misy vera i Snow Prince. Nesoriny ny sarony, natondrony ny molony… ary vaky ny afobe.
Ity no fiheverana mahaliana an'ny andiany Rob Boley, Tales mahatahotra: Serial mpamono olona, izay natomboka ny volana aprily lasa teo Ny oram-panala mitsangana: tantaran'ny Snow White sy Zombies. Ny manaraka dia boky telo hafa (hatreto) ary saga mitohy izay mitaona ny fitaomana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny horohoro, nofinofy ary angano, ary na izany aza dia mahavita mbola misy toy ny tontolo azy manokana.
Ankehitriny, ndao ataovy mahitsy ity, izay nataon'i Boley dia tsy voatery hoe zava-baovao. Seth Grahame Smith dia namorona tranga iray rehefa nampiditra zombies tamin'ny tontolon'ny Austen's Pride and prejudice, ary ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra toy ny "Grimm" sy "Once upon a Time" dia nanaporofo fa mbola misy dikany ny angano. Niaraka tamin'ireny ny andiana olon-kafa, ny ankamaroany dia nianjera teny amoron-dalana ho toy ny fanahafana mora foana an'ireo teo alohany.
Ka inona no mahasamihafa an'i Boley? Fa maninona no mitodika any amin'ny pejy ny andian-tsariny?
Tena tsotra izany. Tsy nanao na inona na inona i Boley tamin'ny andiany iray. Tontolony tanteraka ny tontolony misy tantara, fiteny, rafitra kilasy, ary fivavahana misy azy, ary na dia manodidina an'i Snow sy ny tafiky ny zombie noforoniny aza ny tantara dia misy zavatra maro hafa hita ao anatiny ny fonony amin'ireo boky ireo.
Ka andao handavaka kely. Iray amin'ireo endrika tiako indrindra amin'ny Tales mahatahotra dia tsy toy ny teo alohany ny angano, tsy misy na iray aza amin'ireo endri-tsoratra azo faritana ho tsara na ratsy tanteraka. Misy lesoka izy ireo ary ny lesoka dia mahatonga azy ireo ho mora azo kokoa amin'ny mpamaky.
Raiso, ohatra, ny Mpanjakavavy Adara. Taloha, ny Mpanjakavavy ratsy fanahy avy amin'ny tantaran'i Snow White dia naseho ho vehivavy adala izay tsy mahazaka olona tsara tarehy kokoa noho izy, ka aleony mahita an'i Snow novonoina tany an'ala toy izay hijoro ho vavolombelona mihamamiratra hatrany ny hatsarany amin'ny antoandro.
In Tales mahatahotra, Boley mamadika an'io archetype io eo an-dohany. Ny mpanjakavavy, eny, dia vehivavy tsy misy fotony, fa izy koa dia voan'ny mazika an'ny Mirror izay manome torohevitra azy. Rehefa nandeha ny tantara ary tsapany fa namboarin'ilay fitaovana niady mafy tamin'ny fitiavany azy nandritra ny taona maro izy, afaka mahita ny tolona nataony isika mba hampifanarahana ny safidiny ary hanjary mihoatra ny naha-izy azy. Tsy toetran'ny stock intsony izy fa tokony handray fanapahan-kevitra sarotra kokoa. Tokony hivoaka ivelan'ny tenany izy ary hitsangana hihaona amin'ireo toe-javatra izay nanampy tamin'ny famoronana.
Ary avy eo, misy Snow. Mety ho mafy kokoa ny hametahana ny oram-panala raha oharina amin'ny endri-tsoratra hafa amin'ity andiany ity. Marina, izy dia nandany ny ankamaroany ho toy ny mpitari-tafika ny tafiky ny zombies, saingy ny mason-tsivana ny lasa izay omena antsika no mahatonga azy hitsambikina avy amin'ilay pejy. Tsy ilay andriambavy efa nahazatra antsika nandritra ny taona maro. Notezaina ho mpanampy ao an-dakozia ao amin'ny lapa izy ary marokoroko sy ratsy fitondran-tena izy. Izy no sary tiako indrindra an'i Snow White izay novakiako.
Grouchy, ilay dwano izay sendra tia an'i Snow koa dia misongadina eo amin'ireo mpilalao sarimihetsika. Tsy dwarf manana toetra ratsy fotsiny izy. Izy koa dia manana vava maloto, raim-pianakaviana dwarf, ary faniriana lalina mipetraka hamono ny Printsy Mikael… izay ataony… miverimberina. Hey, tadidio ilay saga zombie?
Ary raha mbola eo amin'ny lohahevitr'ireo zombie isika, andao hiresaka momba ireo zombie hita ao amin'ity andiany ity. Ny ankamaroan'ny mpanoratra dia afa-po miatrika karazana zombie iray isaky ny mandeha, fa tsy ity mpanoratra ity. Nosinganin'i Boley ho sokajy telo izy ireo.
Ny Horrors no fanjakana voalohany amin'ny zombification. Somary mihetsika haingana izy ireo, ratsy toetra, ary toa manana fahatsapana marobe ary mamirifiry hafanana be. Izy ireo aza dia mandray baiko misolelaka amin'ny zombie Snow.
Ny drudges dia manaraka bebe kokoa ny zavatra hitantsika amin'ny ankamaroan'ny sarimihetsika zombie ankehitriny. Izy ireo dia zavatra mangatsiaka, miadana, tsy misy saina manapotika sy mandany ny lalana manerana ireo fanjakana.
Ary avy eo, ao ny Creepers. Taolana ara-bakiteny izay miakatra avy amin'ny tany, tonga toy ny andiana bibikely izy ireo ary ny fahafahan'izy ireo mamory ny tenany miaraka amin'ireo sombin'ireo namany lavo dia mahatonga azy ireo tsy ho faty intsony.
Raha efa namaky ny hevitro taloha ianao dia fantatrao fa tsy lehilahy manao mpanimba aho, indrindra fa amin'ny boky. Ny novela dia zavatra iray izay tokony hiainana isam-pejy, isan-teny, ary izao tontolo milamina sy mampatahotra an'i Boley izao dia tokony hiaina nefa tsy mahafantatra mihoatra ny fototra, fa andao jerena ny zavatra farany alohan'ny handaozako anao.
Niresaka angano izahay, ary nitafa zombie izahay, fa ho an'ireo mpankafy ny sarimihetsika horonantsary sy ny biby goavambe dia misy antony iray hafa hakana an'ity andiany ity anio. Rehefa mamaky ireo boky ianao dia manomboka mahatsikaritra tsara fa manaja fatratra an'ireo biby goavam-be amin'ny sarimihetsika Universal Studios i Boley. Mampahafantatra ny Wolfman sy ny Phantom an'ny Opera amin'ny fomba mifanaraka tanteraka amin'ny tontolon'ny angano izy, ary mampanontany tena anao hoe maninona no mbola tsy nisy nanao an'io taloha. Ary azoko antoka fa mbola hisy bebe kokoa satria mitohy ity andiany mahafinaritra ity.
Ny toetra mampiavaka ny boky dia mamoaka anao maniry bebe kokoa, matetika mifarana eo afovoan'ny sehatra iray ka tsy maintsy maka ny boky manaraka ianao mba hahalalanao izay ho avy manaraka. Manasoa anao, araho ny rohy eto ambany ary ampidino ny kopia anao anio! Azonao jerena ao amin'ny Facebook ihany koa Andriamatoa Boley Eto ary ao amin'ny Twitter Eto.
Ny tantara mampatahotra milahatra:
:Ny oram-panala mitsangana: tantara mampatahotra an'ny Snow White sy Zombies
Io Apple Ratsy Fanahy io: Tantara Mampatahotra an'ny Snow White ary Zombies Mbola Bebe Kokoa
Io Volana Ravenous io: Tantara mampatahotra an'ny Hood mena ary Werewolves
Ity tafio-drivotra ratsy ity: Tantara mampatahotra amin'ny hatsaran-tarehy sy ny phantom
Mankanesa aty amiko indray amin'ny herinandro ho an'ny tafatafa iray manokana miaraka amin'ny mpanoratra rehefa omeny antsika ny loto rehetra momba ny niandohan'ilay andian-tantara sy ny sasany amin'ireo antsipiriany manaitra momba ireo tantara ho avy amin'ity andiany ity! Hanana helo iray amin'ny fifaninanana iray ihany koa isika manomboka anio, ary mpandresy iray manambina no ho kintan'ny tantara mampihoron-koditra nosoratan'i Rob Boley tenany!
AnganoRob E. BoleyTales mahatahotraBlanche NeigeWerewolvesZombies
Guillermo del Toro Mety nahita ny kintany ho an'ilay sarimihetsika haunted Mansion
Ny fifaninanana amin'ny horonantsary tantara mampatahotra anao manokana